Chii Chinoitika kana iwe uchibvisa iyo Freewheel kubva paWiricheya? | Karman® Mawiricheya
Chii Chinoitika kana iwe uchibvisa iyo Freewheel kubva paWiricheya?
Posted on October 12, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
A freewheel ari vhiri rakabatanidzwa pane furemu ye wiricheya iyo inobvumira kuti iende pamusoro penzvimbo dzakasiyana siyana nekuda kwehukuru hwevhiri nekugadzirwa. Kana iyo freewheel ari kubviswa kwakasiyana mhando yevhu hakuzove nyore kana kutokwanisika kuyambuka nekuti ruzhinji rwe mavhiripu Iine mavhiri maviri madiki kumberi ayo anowanzo fanirwa nerumwe rudzi rwevhu sekongiri kana pasi pehuni. Kubvisa iyo yakasununguka freewheel zvakare kunogumira kufamba sezvazviri inopa nhanho yepamusoro yechiyero uye kutendeuka nekukasira. Ichi chinamatira chakakwana kushandisa mupaki nemhuri uye neshamwari. Izvo zvinobvumidza zvirinani kufamba kutamba mitambo nevana uye kudzivirira kupidiguka pamusoro.
The freewheel kusungirirwa ine arched furemu inobvumira vhiri kutenderera zvakasununguka uye chinamato kumagumo chinoribvumira kunamatira kune iyo wiricheya. Izvi zvinobva zvawedzera kufamba nekuti inosimudza mavhiri epamberi zvishoma kuitira kuti mavhiri ekumashure uye vakasununguka iva nerutsigiro rwakawanda. Nerutsigiro haruchisiri pamavhiri epamberi, ayo ari madiki uye kwete seanofambisa, iyo wiricheya mushandisi unogona kushandisa iyo vakasununguka serutsigiro rwekufamba pamusoro penzira, mapundu, huswa, mavhu, uye ivhu rakasununguka.
Kubatanidza iyo vakasununguka kupinda cheya, the wiricheya unofanirwa kunge uine bhawa rekutsigira pamberi netsoka-zororo. Izvi zvinoita kuti iyo freewheel inosara yakasungirirwa uye haizobvi izvo zvinogona kukonzera kusaenzana kana zvichishandiswa. Zvakare, nekusimudza kumberi kwemavhiri inopa zvimwe kufamba uye kuenzanisa. Paunenge uchibatanidza iyo wakasununguka yakakosha kuti inotambanudzwa usati waisungira pafuremu. Kana ikangosungirirwa mushandisi anofanirwa kuyedza nekushandura pachigaro a kuve nechokwadi chekuti freewheel iri yakachengeteka pairi. Kuti ubatanidze zvakanaka iyo vakasununguka iwe unofanirwa kuiwedzera usati wajekesa kuti ubvise imwe rutsigiro kubva uye kudzivirira kukuvara kana kukuvara. Kamwe iyo yemahara isina kukamurwa ingo chengeta muhomwe uye yakachengeteka kumashure kweiyo wiricheya.
zhinji wiricheya vashandisi vakabatsirwa nekushandiswa kweiyo vakasununguka uye ndakaunza mufaro kwavari nekuda kwa kugona kuve panze zviri nyore kudaro. Vazhinji vava kugona kutamba nevana vavo, enda kune vekunze adventures nemhuri uye zvakanyanya zvakakosha kupedzisa zuva nezuva basa ravakange vasingagoni.
Kufunga Ndeipi Rudzi Rwakanakisisa rweWiricheya